Ny fampielezan-kevitra #GetVaccined dia mahazo fanajana matetika | Martech Zone
Na dia talohan'ny nitondrana vaksiny COVID-19 voalohany tany Etazonia tamin'ny Desambra 2020 aza dia nisy olona malaza amin'ny fialamboly, governemanta, fahasalamana, ary orinasa niangavy ny Amerikanina hanao vaksiny. Taorian'ny fitsangatsanganana voalohany, na izany aza, dia nihena ny hafainganan'ny vaksiny na dia efa nanjary betsaka kokoa aza ny vaksiny ary nitombo ny lisitr'ireo olona afaka nahazo izany.
Na dia tsy misy ezaka be aza handresena lahatra ny olona rehetra afaka manao vaksiny hanaovana izany, misy vondron'olona sasany azo resena lahatra, fa tsy amin'ny dokambarotra na ny dokotera Anthony Fauci. Amin'izay lafiny izay, ny fanerena ny fanaovana vaksiny ny olona dia nanala sarona ny fetra napetraky ny PR, ny marketing, ary ny paikady fanaovana dokambarotra amin'ny fanatontosana demografika sasany ary, raha nanao izany, dia nahazo fampahalalana vaovao - ireo mpanentana media sosialy - fanekena sy fankasitrahana lehibe.
Misaotra betsaka amin'ny a $ 1.5 miliara PR sy blitz fanaovana doka natomboky ny White House tamin'ny martsa 2021, 41% ny mponina dia vita vaksiny tanteraka tamin'ny faran'ny volana Mey, araka ny angona avy amin'ny Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Saingy ny fahombiazan'ny ezaka nentim-paharazana dia toa nanjavona rehefa nanakaiky ny fahavaratra, ary nihena ny fizotran'ny vaksiny.
Ny White House dia mila fomba vaovao sy fandidiana kokoa hamahana ny paosin'ny tsy fahatokisana vaksinina sy fisalasalana misy manerana ny firenena. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa hanangona tafiky ny influencers hampihemotra ny fampahalalana diso momba ny vaksinina ary hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ireo vondrona fa ny fikarohana nataon'izy ireo dia nanohitra ny fahazoana ilay vaksiny tsy noho ny fivavahana na ny foto-kevitra politika, fa noho ny antony manokana.
Nitaraina ny mpikambana ao amin'ny Gen Z fa tsy manamboatra ny hafatr'izy ireo ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka Taranaka Instagram. Ohatra, vehivavy 22 taona voatonona tao amin'ny fampahalalam-baovao mifantoka amin'ny siansa stat tamin'ny volana aprily dia nanipika fa tsy nisy na iray aza ny fandefasan-kafatra hafatra tamin'izany fotoana izany nanazava ny antony tokony hahazoan'ny vatan-dehilahy 19 taona iray vaksiny.
Ny fijerena ny angon-drakitra Instagram dia ilaina amin'ny fahatakarana ny antony nitodihan'ny White House ho any amin'ny influencers hahatratra ny olona toa azy, ary manampy amin'ny fanoharana ny fomba nanaparitahana izany hetsika izany teo amin'ny sehatry ny influencer. Tao anatin'ny valo volana voalohany tamin'ny 2021, nisy 9,000 ireo influencer tao Etazonia no nanao lahatsoratra 14,000 izay nanentana ny mpanaraka azy ireo hanao vaksiny sy hampiditra ireo diezy. #vaccined, #getvaccined, #vaccineswork, #vily vita vilana ary #getthevax. Ireo lahatsoratra ireo dia natodika tany amin'ny mpanatrika nahatratra olona 61 tapitrisa, izay 32% tamin'ireo dia tao anatin'ny sokajy 13-24 taona. Ny sakany lehibe amin'io isa io dia avy amin'ny paositra misy anarana an-trano toa an'i Reese Witherspoon, miaraka amin'ny mpanaraka maherin'ny efatra tapitrisa, ary Oprah Winfrey, miaraka amin'ny telo tapitrisa sy sasany.
Saingy eo amin'ny tontolon'ny influencer, ny lehibe kokoa dia tsy tsara kokoa hatrany. Mitovy lanja amin'ny haben'ny mpijery ny zava-misy fa ny 58% amin'ireo lahatsoratra dia tsy avy amin'ny anaran'ny marquee fa avy amin'ny nano-influencers, izay manana mpanaraka dia manisa eo amin'ny 1,000 ka hatramin'ny 10,000. Ny mpanaraka ny nano-influencers dia fantatra fa tena mirotsaka sy tsy mivadika, mampiseho haavon'ny fanoloran-tena ary, eny, fitaomana izay tsy azon'ny dokotera Fauci tiana kasihina. Tamin'ny fizarana ny tantaran'izy ireo manokana momba ny fanaovana vaksininy, ary ny famporisihana ny mpanaraka azy ireo handinika izany, ireo mpisoloky dia naneho ny maha-azo itokiana azy izay tsy hita tamin'ny fampielezan-kevitry ny governemanta na fanentanan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana nopotserina tamina jargon-pitsaboana.
Raha mazava ny resaka dia tsy bala volafotsy ny tosika mba hanaovana vaksiny ny olona. Raha nahatratra 41% ny tahan'ny fanaovam-baksiny tao anatin'ny volana vitsivitsy taorian'ny nahavitan'ny besinimaro ny vaksininy, ny isan-jaton'ny Amerikanina nanao vaksiny tanteraka dia nisondrotra 14% fanampiny tao anatin'ny dimy volana lasa [hatramin'ny 9/20]. Araka ny holazain'ny mpivarotra tsara aminao, amidy ny tahotra, ary ny fampahalalana diso sy fanazavana momba ny fanoherana vaksiny dia namboarina na taiza na taiza avy amin'ny vaovao an-tariby ka hatrany amin'ny efitrano fianarana akanin-jaza dia manome antoka fa io dia olana iray izay tsy ahatongavantsika mihitsy amin'ny marimaritra iraisana.
Ny tahan'ny fanaovam-baksiny eo amin'ny tanora 12 ka hatramin'ny 17 taona iray amin'ireo demografika nanantenan'ny White House ho lasibatra amin'ny fampiasana influencer, nitombo hatramin'ny 18% tamin'ny tapaky ny volana Jona ka hatramin'ny 45% hatramin'ny 20 septambra araka ny angon-drakitra CDC. Ary na inona na inona tarehimarika sy isan-jato, tsy misy isalasalana fa ny influencers dia manana fahafaha-manao lehibe hampiasa ny sehatr'izy ireo ho amin'ny tsara. Ny fanaparitahana hafatra mieritreritra fiaraha-monina izay antenaina handresena lahatra ny Amerikanina maro hiaro tena amin'ny COVID-19 no ohatra hita maso indrindra hatreto, ary azo antoka fa tsy ho ity no farany.
Miaraka amin'ny fiverenan'ny fandefasana lavitra ny fiaraha-monina sy ny sarontava noho ny fahasamihafan'ny Delta amin'ny viriosy, dia ho hendry ny marika sy ny orinasa ny manaraka ny fitarihan'ny White House ary mihevitra ireo mpiorina ho singa iray tena ilaina amin'ny ezaka ataon'izy ireo hamporisihana ny olona hanao vaksiny, tsy lazaina intsony fitaovana miha-manandanja eo amin'ny sehatry ny fitaovam-pivarotana ankapobeny sy ny fifandraisana amin'ny daholobe mandroso.
Zahao ny fanadihadiana vao haingana nataon'i HypeAuditor momba ny 1,600 influencers manerantany, manome ny fomba fijeriny ny fomba fifampiresahan'ireo influencer amin'ny marika.
Sintomy ny valin'ny fanadihadihana nataon'i HypeAuditor
Tags: mahazo vaksinahypeauditormarketing marketingvaksinyvarotra vaksinyvax
Hevitra 5 rehefa hametraka ny toeran'ny findainao amin'ny tsena japoney